कस्तो हुन्छ यौन साथीको विषयमा महिलाको रुची ? - Dakpi Khabar
कस्तो हुन्छ यौन साथीको विषयमा महिलाको रुची ?
सन् १९९९ मा आएको चलचित्र अमेरिकन पायको उदाहरणको कुरा गर्ने हो भने तपाई कुनै महिलाका कति यौन साथी होलान भन्ने जान्न चाहनु हुन्छ ? त्यसो हो भने महिलाको जवाफलाई तीन गुनाले जोड्नुस, यही पुरुषको यौन साथीको कुरा गर्दा पुरुषले जति बताउँछन् त्यही अंकले भाग लगाउनुस् ।
जेसिका (अमेरिकन पाय चलचित्रकी अभिनेत्री टारा रीड) चलचित्रमा तीन गुनाको नियमलाई बिल्कुल गुरुत्वाकर्षणअनुसारको साइन्स मान्छिन् ।
चलचित्रभन्दा फरक कुरा गर्ने हो भने सन् १८५९ मा जब चार्ल्स डर्विनको सिद्धान्तले भनेको छ कि पुरुष जैविक रुपबाट असंयमी हुनछन,जबकि महिला स्वभाविक रुपले पवित्र यौन सम्बन्ध चाहन्छन् ।
यद्यपि समयका साथसाथै रीतिरिवाज परिवर्तन भइरहन्छन् । अहिले पनि पारम्परिक मान्यताको हिसावबाट पुरुषको कामुकता अनियन्त्रित हुन्छ भने महिलाहरुलाई लज्जाबोध गराइन्छ ।
साइन्स जर्नालिस्ट एंगेला साइनलले यी धारणाहरुलाई विज्ञानको कसीमा राखेर हेरिन् । साइनीले बीबीसीसँग भनिन, गत तीस चालीस वर्ष पहिलाको तुलनामा बढी वास्तविक तस्वीर देखिएका छन् । सेक्ससँग सम्बन्धित सबै धारणाहरु र परम्पराहरुको आधार थियो । नकि विज्ञान र सबूतको आधारमा।
यसमा महिलाहरु कैजुअल सेक्सका लागि खुला हुन्छन् भन्ने बताइएको छ ।के उनीहरु आफ्नो साथी साथी विषयमा सतर्क हुन्छन, हो, यसमा पनि उनीहरु कम खुला हुँदैनन् ।
डार्विनको रुढीवादी सिद्धान्तले लामो समयदेखि मानिसहरुलाई प्रभावित गर्दै आएको छ ।प्लेब्वायको १९७८ को अंकमा एउटा स्टोरी छापिएको थियो कि के पुरुषलाई आफ्नी महिलालाई धोका दिनु आवश्यक छ ?
यसमा नयाँ विज्ञान देखिन्छ । जब अमेरिकी राष्टपति बिल क्लिन्टनको कुख्यात प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक भयो तब न्युयोर्करले क्लिन्टनको व्यवहारको बचाउ गरेको थियो ।
न्युयोर्करले क्लिन्टनलाई विकासवादी मनोविज्ञानको आधारमा बचाउ गरेको थियो । उक्त लेखको शिर्षक थियो, बाँय्ज विल बी बाँय्ज । तर साइनीले बीबीसीलाई २०१३ मा जर्मनीमा भएको एउटा अध्ययनको आधारमा बताइन् । यो रिपोर्ट सन् १९७० को दशकको एउटा प्रयोगमा अधारित थियो।
यो अध्ययनमा पुरुष र महिलाको एउटा समूहलाई सामेल गराइएको थियो। उनीहरुलाई अपरिचित व्यक्तिसँग सेक्सका लागि भन्नु थियो। प्रयोगको सुरुवाती नतिजा जुन आयो, त्यसमा पुरुषको तर्फबाट हुन्छ थियो भने महिलाको तर्फबाट हुन्न थियो ।
यो विषयमा पुरुष बढी बजबुतीका साथ खडा रहे । यद्यपि यो विषयमा साइनीले भनिन् कि यहाँ कुनै दोस्रो कारण पनि छ । यसमा हिंसाको खतरा वा सामाजिक कलंकजस्ता कारण महत्वपूर्ण छन् ।
यस्तैमा सन् २०१३ मा यसमा एउटा गोपनीय अध्ययन गरियो । पुरुष र महिलाहरुलाई सम्भावित पार्टनरको तस्वीर देखाइयो र उनीहरुसँग सोधियो कि के तिमी उसँग सत्न चाहन्छौ ?
यसमा दुवैले मौनता साँधे । पुरुषले अन्ततः महिलाको चुलनामा बढी पार्टनर छाने र तर महिलाहरु पनि समान रुपले कैजुअल सेक्सका लागि सहमत थिए।साइनीका अनुसार महिलाहरु पार्टनर चयनमा सतर्क हुन्छन् तर संयमी हुँदैनन् ।
डार्विनको सिद्धान्त त्यो आइडियामा आधारित थियो जसमा भनिएको थियो कि पुरुष जैविक रुपष्ले बढी उत्तेजित हुन्छ । महिलाहरुका साथ प्रेग्नेन्सी र बच्चा पालन पोषण जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरु वैवाहिक जीवनमा भरोसा गर्दछन् ।
यसप्रकारको सोच अहिले पनि जिवितै छ । यद्यपि साइनी भन्छिन् कि डार्विनले सामाजिक सन्दर्भहरुको आधारमा कुरा गरेका हुन् । यो सबै कुरा पूरातन समाजमा फिट हुन्छ । साइनीका अनुसार पुरानो समयमा महिलाहरुको कामुकता दबाएर राखिएको थियो ।
उनले भनिन्, कि डार्विनले यो कुराको उपेक्षा गरे कि महिलाहरुको कामुकतालाई पितृसत्तात्मक समाजमा हजारौ वर्षदेखि दबार राखिएको थियो । गैरपश्चिमी समाजका अनुसार महिलाहरुको पारम्परिक यौन व्यवहार जैविक गुणहरुको तुलनामा साँस्कृतिक मूल्यमा बढी निर्भर छ।एजेन्सी